Narendra Raule | Interesting Articles and Facts - Part 7
आजबाट लोकस मेला २०१२
काठमाडौं- आजबाट (२२ असार) नवौं ‘राष्ट्रिय सूचना तथा प्रबिधि लोकस मेला २०१२’ सुरु भएको छ । तीन दिन सम्म चल्ने यो मेला पुलचोकस्थित् पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको प्राङगणमा हुँदैछ । ‘बढ्दो डिजिटल डिभाइड कसरी कम गर्ने’…
नरेन्द्र रौले सोच्नुस्, शिक्षकले एकोहोरो पढाइरहनु र विद्यार्थीले सुनेर बस्नु कति पट्यारलाग्दो होला ? निश्चय नै, कतिखेर क्लास छाडौं-छाडौं भैदिन्छ। झन् आफूलाई अप्ठ्यारो लाग्ने वा मन नलागेको विषय भए त पटक्कै ध्यानै जाँदैन। किनभने विद्यार्थीहरू…
नरेन्द्र रौले ( यो लेख कान्तिपुरको हेलो शुक्रबारमा आजको अंकमा प्रकाशित भएको हो । इपेपर हेर्ने भए यहाँ क्लिके हुन्छ । ) रिवेका ब्ल्याक (गायिका) हरेक तस्विरहरुमा सेता दन्त लहर टिलिक्क टल्काउदै हेरौं हेरौं लाग्ने मुस्कान छोड्ने रिवेका व्ल्याक,…
लोकप्रिय बन्दैछ जिपिएस प्रबिधि
नरेन्द्र रौले राजधानीमा बढ्दै गएका अपराध नियन्त्रण गर्न महानगरीय प्रहरीले जिपिएस (ग्लोबल पोजिसन सिस्टम) प्रबिधी सुरु गरेको छ । जनपद प्रहरीका ६१ वटा र ट्राफ्रिक प्रहरीका चार वटा सिआरभि (कन्ट्रोल रुम भेइकल) उपत्यकाका बिभिन्न ठाउमा खटाईएका…
घरमै फल्छ डलर
नरेन्द्र रौले नियमित अफिस गईरहनुपर्दैन । कसैको दबाब र हस्तक्षेप पनि नहुने । स्वतन्त्रतापुर्बक घरमै बसेर मज्जाले काम गर्न सकिने । क्या काईदा ! राम्रो वेव डिजाईनर र सफ्टवेयर डेभलपरले अब जागिरका लागी कतै धाउनुपर्दैन…
मोबाइलमै छ जीवनशैली
नरेन्द्र रौले/ जनक तिमिल्सिना तपाईंको दैनिकी के बाट सुरु हुन्छ ? बिहानीको समयमा पत्रिका पल्टाउदै चिया वा कफिको चुस्किबाट ? एकैछिन् अघि फर्कौं, त्यो भन्दा अघि तपाईंको निद्रा मोवाईलको अलार्मले ब्युँझाएको थियो । किनकि ठूला…
Home, Media October 17, 2014
‘विकट ठाउ अबसरको खानी हो’- मोहन मैनाली (डकुमेन्ट्रीमेकर)
नरेन्द्र रौले उमेरले ५० वर्ष छुनै लागेपनि कामप्रति मोहन मैनालीको सक्रियता घटेको छैन । कपाल सेताम्य फूल्दै गएका मैनालीलाई बरु पुस्तक पढेर, डकुमेन्ट्री हेरेर नियमित पाईने प्रतिक्रियाले थप उर्जा दिन्छ । केही गरौं भन्ने उत्साहले…
Media October 17, 2014
छोरीलाई के खुवाउने नारायण दाई ?
-मिलन बगाले नागरिक दैनिकका संस्थापक सम्पादक नारायण वाग्लेले जागीर छोड्नु भएको खबर आयो । खुशी लाग्यो । जागीरले आफूलाई खाईहाल्ने उमेर आएको थिएन, त्योभन्दा अलिकति अगाडी छोडेर ठीक गर्नुभयो । उमेर र जागर रहे जागीर…
बैंसका बेला / भैरब रिसाल
नरेन्द्र रौले असारे झरी बर्सिरहेको थियो । ठ्याक्कै यतिबेलाकै जस्तो मौसम । मनमा एक प्रकारको खुल्दुली र कौतुहलताले डेरा जमाउदै थियो । अलिअलि लाजले काउकुति लगाउदै थियो । किनकि त्यो मेरो विवाहको दिन थियो ।…
बैंसका बेला/अभि सुबेदी
नरेन्द्र रौले कोमल मन बोक्न गाह्रो हुँदोरहेछ । यो झनै गह्रुंगो भैदिन्छ । अनि त्यसलाई बिसाउन ‘चौतारी’ खोजिन्छ । जीवनमा त्यो ‘चौतारी’ नभेटिदा पटक पटक गाह्रो भएको छ मलाई । त्यही भएर त म कवि…